March 6, 2019 » Myanmar Peace Monitor
Naga women in Myanmar dream of inheriting land
တိုင်းရင်းလက်နက်ကိုင် ၄ ဖွဲ့အကောင့်တွေပိတ်ခဲ့တဲ့ FaceBook ကို ကန်ဝါရင့်အမတ် ရှင်းလင်းချက်တောင်းခံ
KIA/TNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့က အရပ်သား ၇၀ ဦးကို ဖမ်းဆီးဟု သတင်းထွက်ပေါ်
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးအောင် ဆောင်ရွက်မှသာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တိုးတက်နိုင်ဟု တောင်ကိုရီးယားသံအမတ်သုံးသပ်
ကဆုန့်ဒေသတွင် မိုင်းပေါက်ကွဲ၍ စစ်ရှောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရ
RCSS နှင့် SSPP တို့အကြား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး တောင်းဆိုမှု ၂ ဖွဲ့လုံး လက်ခံကြိုဆို
ရက္ခိတလမ်းစဉ်ဟာ အိပ်မက်ချိုလား၊ အိပ်မက်ခါးလား
မြစ်ဆုံ၊ NCA ကို မဆန့်ကျင်ရန် တရုတ်က ကချင်အသင်းတော်ကို သတိပေး
“We—all the individual members in the alliance—were prepared to signabilateral ceasefire agreement with the government,”aKIO official in Laiza told KNG.
It had been the Northern Alliance’s preference that each member group sign the bilateral ceasefire agreement at the same time in the same venue. The government reportedly rejected this plan, but, according to the Peace-talk Creation Group’s (PCG) Lamai Gum Ja, the government representatives “promised that they would submit the alliance’s bilateral ceasefire plan to the government and military.”